အဖွားတို့ရွာ ၂၀၁၁ ~ စန္ဒကူး
ကျေးလက်သဘာဝနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး ရေးဖို့ စိတ်ကူးနေတာ။ ကူးကူးပိုစ့်လေး ဖတ်လိုက်ရတော့ ကွက်တိပဲ ပုံတွေလေ :P
ရေးဖြစ်ရင် လင့်ပေးထားလိုက်မယ်နော် :)
ဟုတ်...ကဲ့ပါ။ ပုံလဲ အသုံးတည့်ရင်ယူသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်..
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ကလား။တို့ က မော်ကျွန်းသူ။ငယ်ငယ်ကဆို
သူငယ်ချင်းရွာတွေလိုက်ပြီး အိုင်ပတ် ပြီး ငါးဖမ်းတာ၊လှေလှော်တာတွေ သတိရသွားပြီ။
ရွာကိုပြန်လွမ်းသွားတယ် မပြန်ဖြစ်တာ ဆယ်နှစ်ကျော်သွားပြီ..။ ငယ်တုန်းက ကြိမ်ဖူးဟင်းစားဖူးတယ် ရှမ်းလိုချက်ပြီး ကောက်ညှင်းနဲ့စားတာ..။ ပျော်စရာလေး ပုံတွေကိုကြည့်ရတာ..။
ပိုစ့်ဖတ်ပြီးလည်းပျော်တယ် ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးလည်း ပျော်တယ်
အဲဒီလို တောသဘာဝတွေကို အရမ်းဘဲ သဘောကျတာ။
တို့ဘက်မှာလည်း ရှိတယ်။ ဟင်းရည်ချက်စားတယ်
ပြုတ်ပြီးထောင်းစားလည်း ကောင်းတယ် ခါးသက်သက်လေးရယ်
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ငယ်တုန်းက ဘဝကို သတိရလိုက်တာ..
တို့ လည်း မြစ်ဝကျွှန်းပေါ်သူပဲ ကူးကူးရေ..နယ်ဓလေ့လေးတွေက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်..ဟိုင်းကြီးကိုတောင် လွမ်းသွားပြီ..
ငပိရည်ကြည့် ပြီးသရေကျသွားတယ် မမရေ
အဖွားတို့ရွာက ပျော်စရာကြီး ဒါနဲ့ ငါးပြေမ နဲ့ ဇောင်းလျားသီး ချက်စားရင် ကျောက်ကပ် ရောဂါ က တကယ် ပျောက်တယ်ပြောကြတယ်နော်
စေတနာ နဲ့ ရွာလေးရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကို ရိုက်ပြပေးတဲ့ ညီမ ကိုကျေးဇူးနော် မုံဟင်းခါး လေး လည်းစားချင်တယ် မုံဟင်းခါး က အကြည်ချက်လား
မိုက်တယ်ကွာ။ နောက် သေချာအားတော.မှ ရွာအကြောင်း၊တောအကြောင်း သေသေချာချာကို ပုံတွေကြည်.၊စာဖတ် လုပ်ဦးမယ်။ အခုတော.မအားသေးလို. အမြန် ကြည်.သွားတာတောင် စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။
စမ်းချောင်းလေးတွေ ခွေးကလေးတွေ တောကြက်ချက်တာတွေ ငါးတွေ .
အောင်မလေး ပျော်စရာကြီးပါလား မကူးကူးရေ ..
ရွာကိုသတိရသွားပြီ ကူးရေ ပြန်ချင်လယ်